Global Voices teny Malagasy » Haiti : Ny mpihira sa ny mpampianatra? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Marsa 2011 4:45 GMT 1	 · Mpanoratra Georgia Popplewell Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Karaiba, Haiti, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Araka ny vaovao ao amin'ny Twitter momba ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana Filoha am-pirenena androany ao Haïti, filaharan-be tao amin'ny birao fifidianana , tsy nahita ny anarany tao amin'ny lisi-pifidianana ireo mpifidy tao amin'ny Lycée Petion  sy tao amin'ny Lycée Croix des Bouquets  , toe-javatra izay efa nahatonga olàna tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ny volana novambra lasa teo. Fa maro ihany koa ireo nanara-maso tamin'ny valim-pifidianana. Manome isa maro an'ilay mpihira Michel Martelly ny fitsapa-kevitra natao herinandro mialoha izay mihoatra lavitra amin'ny mpifanandrina aminny Mirlande Manigat, mpampianatra eny amin'ny oniversité sy vadina Filoha taloha.
“Ireo mpifidy tonga nandatsa-bato tao amin'ny vata-pifidianana tao amin'ny Lycée Cité Soleil izay nihiaka #tetkale ,” dia ni-tweet tamin'ny mpanao gazety Miami Herald Jacqueline Charles  (“tetkale” anisan'ireo anaram-bositr'i Martelly, miresaka an-kolaka momba ny fahasolany), ary sary nalefa tao amin'ny Twitter izay mampiseho ireo kandidà noraisin'ireo mpifidy tami-kafaliana :
Niseho teto  ny kandidà iray, tamin'ny fahatongavany tao amin'ny birao fandatsaha-bato.
Fanontanina mipetraka ao an-tsain'ny olona maro ny mahafantatra hoe iza amin'ireo kandidà no mahazo ny fanohanan'ny Filoha taloha tsy fantatra be eny ihany Jean-Bertrand Aristide , tonga teto an-tanindrazana ny Zoma, enintaona taorian'ny nahavoahongana azy tamin'ny alalan'ny fanongana-panjakana ka voatery azy nialokaloka. Mampiseho izay mety momba ny Ramatoa Manigat ity sary ity @cliffchevalier .
Izay mifandraika amin'ny sora-baventy  izay nivelatra tao Cité Soleil, tanànan'ny mahantra midadasika izay ahitana ireo mponina manohana an'i Aristide. Toy izao ny vakiny : “Efa ao sahady i Mama. Tongasoa, Dada !”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/03/22/15190/
 filaharan-be tao amin'ny birao fifidianana: http://twitter.com/#!/emilytroutman/status/49493628686573568
 mpifidy tao amin'ny Lycée Petion: http://twitter.com/melindayiti/status/49516783387951104
 Ireo mpifidy tonga nandatsa-bato tao amin'ny vata-pifidianana tao amin'ny Lycée Cité Soleil izay nihiaka #tetkale: http://twitter.com/jacquiecharles/status/49515165347102720
 Niseho teto: http://yfrog.com/hst4vzvj